Nezvedu - Fuzhou Bontai Diamond Zvishandiso Co., Ltd.
Fuzhou Bontai Diamond Zvishandiso Co, Ltd yakavambwa muna 2010, Bontai ine fekitori yayo inoshandiswa mukutengesa, kusimudzira nekugadzira marudzi ese edhaimani maturusi. Isu tine akasiyana madhaimani ekugeda uye kupukuta maturusi epasi polish system, kusanganisira madhayamondi ekugaya shangu, madhaimani ekukuya makapu mavhiri, madhaimani ekugaya madhisiki uye zvishandiso zvePCD. Kuti ishandiswe pakukuya zvakasiyana-siyana zvekongiri, terazzo, uriri hwematombo nedzimwe nzvimbo dzekuvaka.
Independent Project Chikwata
Sezvinoratidzwa mumufananidzo, chirongwa chiri muNanjing tai fekitori, ine yakazara nzvimbo ye130,000m². BonTai haingokwanisa chete kupa zvishandiso zvemhando yepamusoro, asi zvakare inogona kuita hunyanzvi hunyanzvi kugadzirisa chero matambudziko paunenge uchikuya nekukorobha pauriri hwakasiyana.
Yakasimba Kubudirira Kugona
BonTai R&D yepakati, inofungidzirwa mukugadzira nePolishing tekinoroji, mainjiniya akakudzwa mu "China Super Hard Zvinhu" muna 1996, achitungamira nedhaimani maturusi nyanzvi nyanzvi
Professional Service Chikwata
Iine ruzivo rwechigadzirwa chigadzirwa uye yakanaka sevhisi system muchikwata cheBonTai, isu hatigone chete kugadzirisa zvakanakisa uye zvinonyanya kugadzirwa zvigadzirwa kwauri, asi zvakare gadzirisa matambudziko ehunyanzvi iwe. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
NYIKA YEMAHARA LAS VEGAS 2019
Kambani yedu inozivikanwa nehupamhi hwayo mhando uye inozivikanwa nekugwinya kwakasimba, kugadzikana uye kukwirira kwakapenya mu "BTD" mhando yedhaimani yekugedza maturusi uye madhaimani polishing pucks, ayo anogamuchirwa kwazvo mumusika wekunze nekukunze. Aivigirwa kuna East uye West Europe, America, Australia, Asia uye Middle East uye musika yose.
Isu tinogara tichitevedzera bhizinesi uzivi hwe "zvigadzirwa zvakanaka, kukuya kwakanaka, uye kwakadzika sevhisi kugona". Kuvimba neyakajeka chigadzirwa kupatsanura, kugadzikana kwechigadzirwa mhando, inoshanda maitiro manejimendi uye yakanakisa sevhisi sevhisi, yave ichizivikanwa uye kuvimbwa nenharaunda yevatengi.
Isu tinoramba tichiramba tichisangana nezvinodiwa zvevatengi vedu, zvakagadzirwa zvakasiyana-siyana, zvinowedzera kukosha kwezvigadzirwa zvedu, uye zvinoramba zvichigadzira kukosha kwevatengi vedu. Vavarira kune hwakanakisa hwedhaimani chishandiso chinopa.